बागलुङमा युआरएलको कलेक्सन सेन्टर – United Reference Laboratory (URL) Pvt. Ltd.
बागलुङमा युआरएलको कलेक्सन सेन्टर
पोखरा, १५ साउन। पोखराको न्युरोड, गिरी कम्प्लेक्समा रहेको युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि(युआरएल)ले बागलुङमा आफ्नो कलेक्सन सेन्टर स्थापना गरेको छ।
बागलुङको अदालतचोकमा स्थापित युआरएल स्याम्पल कलेक्सन सेन्टरको शनिबार धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका वरिष्ठ डा सागरकुमार राजभण्डारीले उद्घाटन गरे। उनले सेन्टर अवलोकन गर्दै युआरएलको प्रविधि र सेवाबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
राजभण्डारीले निजी क्षेत्रलाई फाइदामात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्न आग्रह गरे। उनले स्तरीय ल्याबको सेवा उपलब्ध हुँदा चिकित्सकहरूलाई कार्य गर्न सहज हुने उल्लेख गरे। राजभण्डारीले युआरएललाई विभिन्न स्वास्थ्य दिवसमा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउन र सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउँदै गुणस्तरीय, सहज र न्यून मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न पनि आग्रह गरे।
युआरएलका सञ्चालक सुशील थापाले युआरएले अपनाएको विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट प्रविधि र ल्याबको सेवाले त्यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा नयाँ आयाम थपिने उल्लेख गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष मुकेशचन्द्र राजभण्डारीले दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय रसायन नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको बताए। उनले स्वच्छ प्रतिश्पर्धा गरी सहज, सरल र जनतामैत्री स्वास्थ्य सेवा आवश्यक भएको बताए।
नीलगिरि अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा लक्ष्मी गौतम आयार्यले प्रयोगशालाका स्याम्पलबाहिर पठाउँदा तापक्रममा एकरुपता नहुने, रिपोर्ट ढिलो आउँदा उपचार नै प्रभावित हुने जस्ता समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अब यस्ता समस्या निराकरण हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
नीलगिरि अस्पतालकै डा. गोविन्द गौतमले राम्रो ल्याब नहुँदा विरामी अलमलिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै विरामीको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुने अवस्था कतै पनि हुन नहुने बताए।
संस्थाका अध्यक्ष चेतबहादुर गुरुङले स्थानीयको अपेक्षबमोजिमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै युआरएल विभिन्न निःशुल्क शिविर र सचेतना कार्यक्रम गर्न तयार रहेको बताए।
युआरएलका प्रवन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले धौलागिरि क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सेन्टर स्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए। करिब साढे दुई वर्षअघि स्थापन भएको युआरएलले विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट प्रविधिमार्फत् सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
Previous Article बफ मम खाँदै हुनुहुन्छ ?
Next Article स्क्रप दाइपिस रोगबाट ५३ बिरामी